အလိုအလျောက်အဆင့် Crossing တင်ဒါရလဒ်များ၏ကင်မရာစနစ်တည်ထောင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုတင်ဒါရလဒ်များ၏အလိုအလျှောက်အဆင့် Crossing တည်ထောင်နှင့်အတူကင်မရာစနစ်
29 / 08 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
TCDD5။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıkaတင်ဒါရလဒ်များ၏ကင်မရာစနစ်တည်ထောင်နှင့်အတူ 15 နှင့်7အရေအတွက်ပမာဏအလိုအလျောက်အဆင့် Crossing Shunting ဝန်ဆောင်မှုအတွက်နောက်ထပ်စခန်းများတွေ့ရှိခဲ့
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး5။ £ TCDD 2019 အကြောင်းကိုကုန်ကျသည့်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 320061 / 1.413.259,215JCC အရေအတွက်။ အလိုအလျောက်အဆင့် Crossing နှင့် 15 အရေအတွက်တော့ဘဲ of Service ကိုတွေ့ရှိခဲ့7အပိုင်းပိုင်းများတွင်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıka အကယ်. နောက်ထပ်ဘူတာနှင့်အတူကင်မရာစနစ်တည်ထောင်ဖို့ LIMITED ရရှိခဲ့ EUR လက်ထရွန်းနစ်လုံခြုံရေးစနစ်များသတင်းအချက်အလက်များဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း Trading Company ၏လေလံနှုန်းအလုပ် 1.217.515,00 များအတွက်စာချုပ်ပေးတော်မူ၏။
နူးညံ့သော, 66 အမည်ဖြစ်တယ်။ 360 ဒီဂရီအိုင်ပီ (အသံဖမ်းခြင်းနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဆော့ဖျဝဲအပါအဝင်) Fixed ကင်မရာ, 29 အမည်ဖြစ်တယ်။ စက်မှုတန်း (ပါဝငျ SM-GBIC GBIC switching နှင့်အတူ445 ကီလိုမီတာကြော်ငြာတွေအတူတူအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်) poe Switch (ဆိပ်ကမ်း RJ2210 SFP +) စီမံခန့်ခွဲကအလုပ်ဖုံးလွှမ်း။ ပေးပို့အလုပ် 120 (တရာနှစ်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing တစ်ဦးက Business ထူထောင်ထပ်ဆင့်လွှင်နှင့် Transformer ဘူတာတွင် CCTV ကင်မရာစနစ်ဖို့အခန်းတစ်ခန်း 25 / 05 / 2018 Gateway မှာအိပ်ရာနှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4OF ခွဲရုံစီးပွားရေး TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးထပ်ဆင့်လွှင်ဖို့အဆင့်ကိုကူးသည့် CCTV ကင်မရာစနစ်ထူထောင်။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး4ခရိုင်ရုံးအဆင့် Crossing အတွက်Mıntıka Up ကိုပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ CCTV ကင်မရာစနစ်တည်ထောင်စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်ဖို့ relay ကိုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်ခွဲရုံသည်နှင့်အညီပွင့်လင်းနူးညံ့သောအားဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 248175 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်လုပ်သမားအလုပ်ထူထောင်ခံရဖို့အဆင့်ကူးသတိပေးမှုစနစ်ပြုမိပါလိမ့်မည် 29 / 09 / 2015 စက်လုပ်သမားအလုပ်ထူထောင်ခံရဖို့ level ကူးသတိပေးမှုစနစ် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြုမိပါလိမ့်မည်။ အလုပ်ယန္တရားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ပိုင်ရှင်မှတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး1BÖLGတည်ရှိသောအဆိုပါညွှန်ကြားမှုအဆင့် Cross သတိပေးစနစ်တည်ထောင်ရန်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 119451 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD 1 ။ ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး 34716 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2163488020 - 2163362257 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolge@tcdd.gov.t ဃ) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ဟာစက်လုပ်သမားယောဘသည်Yaptırılacaktır၏ System ကိုတည်ထောင်သတိပေး 13 / 12 / 2016 အဆိုပါအဆင့် Crossing သတိပေးစနစ်စက်ပြင် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 ၏ယောဘသည်Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးတည်ထောင်။ အလုပ်ယန္တရားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ပိုင်ရှင်မှတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး1BÖLGတည်ရှိသောအဆိုပါညွှန်ကြားမှုအဆင့် Cross သတိပေးစနစ်တည်ထောင်ရန်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 542143 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD 1 ။ ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး 34716 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2163488020 - 2163362257 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolge@tcdd.gov.t ဃ) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing အဆိုပါကင်မရာစနစ်တည်ထောင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း 09 / 06 / 2017 System ကိုအဆင့် Crossing STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2များ၏တည်ထောင်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအဆိုပါကင်မရာကို။ တွေ့ 44 ပမာဏအဆင့် Crossing အကြားဒေသဆိုင်ရာဝယ်ယူမှုများနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေးညွန်ကြား Ulku-မြစ်စနစ်တည်ထောင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအဆိုပါကင်မရာကတော့စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်အားဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်အရေအတွက်ကို Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခကနေတဆင့် Anadolu Boulevard): တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 281040 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ 3122111449 - 3122111225 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD5ဧရိယာ်ဆောင်မှုများညွှန်ကြားမှုဇုန်အတွက်ဓာတ်အားခွဲရုံအဆင့်ကို Cross and တင်ဒါ၏ IP ကိုကင်မရာစနစ် 25 / 09 / 2012 နူးညံ့သောကိုယျစားလှယျဒေသဆိုင်ရာရုံး5.BÖLGကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်နူးညံ့သောကိုယျစားလှယျÜZEYİRÜLKERနူးညံ့ADRESİTCDD Administration 5.BÖLGမန်နေဂျာ / MALATYA ဖုန်းနှင့် NO0422 212 48 00 / 41180422 212 48 16 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 21 / 09 / 2012 နူးညံ့ဖက်စ် ရက်စွဲနှင့်အချိန် 15 / 10 / 2012 တွင် TIME: 14: 00 100 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် - £လေလံ JCC 19 ။ IP ကိုကင်မရာစနစ် RECOVERY TC STATE ရထားလမ်းမှ 2012-ခွဲရုံ IP ကိုကင်မရာစနစ်ဝယ်ယူ 129853- အဆင့် Cross မှ TCDD5တစ်ဝိုက်ဌာနစီမံခန့်ခွဲရေး ZONE xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t စျေးပြိုင်တင်ဒါ SUBJECT ကိုပစ္စည်းများ RECOVERY FILE ကို NUMBER ကို5/ 1 အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ADDRESS ကို ON ဆောငျးပါး ...
အဆိုပါအဆင့် Crossing ၏ကင်မရာစနစ်တည်ထောင်
အလိုအလျောက်အဆင့် Crossing အပေါ်
အလိုအလျောက်အဆင့် Crossing ၏ကင်မရာစနစ်တည်ထောင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing တစ်ဦးက Business ထူထောင်ထပ်ဆင့်လွှင်နှင့် Transformer ဘူတာတွင် CCTV ကင်မရာစနစ်ဖို့အခန်းတစ်ခန်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ဟာစက်လုပ်သမားယောဘသည်Yaptırılacaktır၏ System ကိုတည်ထောင်သတိပေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing အဆိုပါကင်မရာစနစ်တည်ထောင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD5ဧရိယာ်ဆောင်မှုများညွှန်ကြားမှုဇုန်အတွက်ဓာတ်အားခွဲရုံအဆင့်ကို Cross and တင်ဒါ၏ IP ကိုကင်မရာစနစ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်လုပ်သမားအဆင့်ကူးသတိပေးစနစ်နှင့်ကင်မရာကို setup ကိုတညျဆောကျပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: IP ကိုကင်မရာများက IP ကင်မရာစားသုံးမှုစနစ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် Center ကတည်ထောင်အပြင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Automatic အတားအဆီးဂိတ်အဆိုပါကင်မရာစနစ်၏တည်ထောင်ဆောက်လုပ်ရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်လုပ်သမားအဆင့်ကူးသတိပေးချက်များနှင့်ကင်မရာကို setup ကိုတညျဆောကျပါလိမ့်မည်